‘दश अर्व खै ? किट किन्ने हो कार्पेट होईन’ भन्दै चितवनमा पनि सरकारविरूद्ध प्र’दर्शन – हाम्रो देश
‘दश अर्व खै ? किट किन्ने हो कार्पेट होईन’ भन्दै चितवनमा पनि सरकारविरूद्ध प्र’दर्शन
भरतपुर : चितवनको भरतपुरस्थित चौबिसकोठीमा बिहीबार बिहान केहि युवाहरु स्व’र्तस्फुर्त रुपमा सडमा देखिएका छन । उनिहरुको हातमा प्ले कार्ड थियो । ति प्ले कार्डहरुमा बिभिन्न नारा लेखिएका थिए ।उनिहरुले राष्ट्रिय झन्डा र गीत बजाउँदै विभिन्न नारा लेखेका प्लेकार्ड बोकेर युवाहरूले सरकारलाई ख’बरदारी गरे।
सरकारले लकडाउन गरेको ८० औं दिन बिहीबार चितवनका युवाले सरकारवि’रूद्ध प्र’दर्शन गरेका हुन् । ‘कोरोना परीक्षणमा १०० प्रतिशत पिसिआर लागू गर, किट किन्ने हो कार्पेट होइन, दश अर्ब खोइ?, कर केका लागि?’ लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर युवाले शा’न्तिपूर्ण प्र’दर्शन गरेका हुन्।
प्र’दर्शनमा उ’त्रिएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति ल’क्षित गर्दै प्लेकार्ड बोकेर प्र’दर्शन गरेका हुन्। ‘नो पिसिआर नुन, तेल, बेसार कोरोनाको उपचार डा. केपी ओली’ लेखिएको प्लेकार्ड प्र’दर्शनमा उत्रिएकाहरूले लिएका थिए ।
प्र’र्दशनमा सहभाग हुन फेसबुक र अरु सामाजिक संजाल मार्फत आ’व्हान गरिएको थियो । “यो कसैको आ’योजना होईन , सरकारको बे’थितिका बि’रुद्ध स्व’तस्फुर्त रुपमा मानिसहरु सडकमा आएका हुन् ।” नारायणगढका युवा व्यवसायी रामकुमार श्रेष्ठले भने । उनले सरकारलाइृ ख’बरदारी गर्नु जि’ममेवार नागरिकको क’र्तव्य भएको बताए ।